FAQs - Shanghai Yangli fanicha yezvinhu Co., Ltd.
Mubvunzo & Mhinduro
1. Uri kutengesa kambani here kana kuti manufactur?
Tiri nyanzvi fenicha Hardware mugadziri kubva 1999.
2. Maodha sei?
Ndokumbira utitumire yako yekutenga odha neemail kana Fax, kana iwe unogona kutikumbira kuti titumire iwe Performa Invoice yeodha yako. Isu tinofanirwa kuziva inotevera ruzivo rweodha yako:
1) Chigadzirwa ruzivo: Huwandu, kutaurwa (saizi, zvinhu, ruvara, logo uye kurongedza chinodiwa), Artwork kana Sample ichave yakanakisa.
2) Nguva yekuendesa inodikanwa.
3) Kutumira ruzivo: Kambani zita, Kero, Runhare nhamba, Kwokuenda chiteshi chengarava / airport.
4) Yekufambidzana neyekufambisa kana paine chero muChina.
3. Ndeipi nzira yese yekuita bhizinesi nesu?
1. Kutanga, ndokumbira upe ruzivo rwezvigadzirwa zvaunoda isu tinokutorera iwe.
2. Kana mutengo unogamuchirwa uye mutengi achida sampuro, isu tinopa Performa Invoice yemutengi kuronga muripo wemuenzaniso.
3. Kana mutengi achibvumidza sampuro uye achida yeodha, isu tinopa Performa Invoice yemutengi, uye isu tinoronga kuburitsa panguva imwe chete patinowana 30% dhipoziti.
4. Isu tinotumira mafoto ezvese zvinhu, kurongedza, ruzivo, uye B / L kopi kune mutengi mushure mekupera kwezvinhu. Isu ticharonga kutumira uye nekupa iyo yekutanga B / L apo vatengi vacho vanobhadhara chiyero.
4.Ko logo kana zita rekambani rinogona kudhindwa pane zvigadzirwa kana pasuru?
Chokwadi. Yako logo kana zita rekambani rinogona kudhindwa pane zvigadzirwa zvako nekudhinda, kudhinda, nekusimbisa, kana kunamira. Asi MOQ inofanira kuva bhora akatakura nemasiraidhi pamusoro 5000 rinovira; yakavanzwa slide pamusoro pe2000 sets; maviri emadziro dhirowa masiraidhi pamusoro pe1000; hinji hovhoni pamusoro pe10000 seti; kabhineti mahinji pamusoro pe10000 pcs etc.
5. Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
Kubhadhara <= 1000USD, 100% pamberi. Kubhadhara> = 5000USD, 30% T / T pamberi, chiyero usati watumirwa.
Kana iwe uine mumwe mubvunzo, pls inzwa wakasununguka kutibata nesu neE-mail: yangli@yangli-sh.com.
6. Ndezvipi zvakanaka zvatinazvo?
1. Yakasimba QC:Kune yega yega odha, kuongororwa kwakasimba kunoitwa nebazi reQC isati yatumirwa. Hunhu hwakaipa huchave hwekunzvenga mukati memusuwo.
2. Kutumira: Isu tine dhipatimendi rekutumira uye anotungamira, saka tinogona kuvimbisa kukurumidza kuendesa uye kuita kuti zvinhu zvinyatso chengetedzwa.
3. Yedu fekitori nyanzvi yekugadzira yakaviga dhirowa masiraidhi, bhora rinotakura masiraidhi, tafura masiraidhi uye ovhini mahinji kubvira 1999.
7. Sei iyo yakapfava yekuvhara slide isingakwanise kushanda nemazvo?
Iko kukonzeresa kwekuvhara zvinyoro-nyoro's dis-basa kunowanzo kukonzerwa nezvinhu zvinotevera panguva yekumisikidza, ndokumbira utarise zvinoenderana nemaitiro anotevera:
(1) Tarisa Side Side Space (clearance).
Kutanga tarisa padivi nzvimbo pakati pekabati uye dhirowa iri mukati mekushivirira. Ndokumbira utarise kune inoenderana chigadzirwa chigadzirwa nzvimbo (clearance) kuraira pane Fenicha, Kicheni chinongedzo peji. Ndokumbira utaure nemugadziri wedare remakurukota kana kabati padivi nzvimbo (clearance) iri 1mm yakakura kupfuura yakasarudzika kudivi kushivirira.
(2) Wongorora iko kuvaka kweiyo kabati uye mudhirowa.
Kana iko kushivirira kunonzwisisika kweiyo chaiyo nzvimbo nzvimbo (clearance) iri mukati me1mm, ndapota tevera kutungamira kwekugadzirisa matambudziko kuitisa kuongorora kwekabhineti kuve nechokwadi chekuti kabineti inovaka kurongeka kweiyo cabinet. Iyo kabati uye mudhirowa inofanirwa kunge iri yakakwana square uye rectangular chimiro. Kana iyo dhirowa kana kabhineti isiri yakafanana kana iri muchimiro chedhaimani, zvinokanganisa mashandiro anoita zvinyoro nyoro.
(3) Tarisa kuiswa kwedhirowa
Kuti usunungure dhirowa uye kabhineti, pinda iyo yemukati nhengo yekuburitsa tebhu uye dhonza dhodhi kuti ubatanidze. Ita shuwa kuti yepakati neyekunze nhengo yakaenzana uye yakaenzana, uye kuti iyo yemukati nhengo yakamisikidzwa padhirowa pamberi pepaneru zvine simba uye yakaenzana. Dhirowa inotsvedza yekuisa ruzivo inokanganisa mashandiro emasiraidhi. Kana kabhineti yako ikasangana nezvose zvataurwa pamusoro, uye matambudziko achiripo, ndapota usazeze kutibata isu, uye nyanzvi ichagovaniswa kuti ikubatsire
Kune kabhoni inoenderana nezvinodiwa pamusoro asi ichitadza kushanda nemazvo, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe rubatsiro rwehunyanzvi.
8. Nei Push yakavhurika slide ine pfupi ejection daro, kana kutadza kuita Push yakavhurika basa?
Iyo Push Yakavhurika Slide haishande nemazvo kana padivi nzvimbo (clearance) iri kunze kwekuregererwa kwakatemwa. Ndokumbira utarise kune ruzivo rwechigadzirwa paFenicha Kicheni Yekuwedzera Peji.
9. Ndinga gadzirisa sei ruzha rwe Push yakavhurika slide?
Chekutanga tarisa slide yepakati neyekunze nhengo yakaiswa yakaenzana uye yakanangana nemadziro edare remakurukota. Kana iyo slide isina kuiswa zvakanaka, ruzha runogona kukonzerwa nekukanganisa kwemaitiro, nekudaro kupfupisa iyo slide ejection daro.